Ii-RPM zakho zebhlog zixhontiweyo, kodwa awuphumeleli ugqatso! | Martech Zone
NgoLwesine, Meyi 10, 2007 NgoMgqibelo, nge-25 kaFebruwari ngo-2017 Douglas Karr
Ngaphandle koncedo endizama ukubonelela ngalo ezinye iibhlog ngokusebenzisa le bhlog, ndiyanceda ukunceda iiblogger ezimbalwa. Ngelishwa, andizukuchitha ixesha elininzi lokwenza njengoko ndingathanda- kuya kufuneka ndisebenze ukuhlawula amatyala. Izolo ndithathe usuku ndaya kwinkomfa yewebhu yengingqi. Le nkomfa ibimnandi, usuku oluhlangeneyo luzele iiseshoni zeyure ezi-1 ebegcwele ulwazi oluvela kubasebenzi bewebhu.
Iseshoni yokuqala yokubloga yayipakishwe! Xa ubhloga ngaphezulu konyaka, uyalibala ukuba uninzi lwabantu aluchazwanga kwiiblogi okanye kubuchwephesha obusisiseko. Omnye wemibuzo ebalaseleyo yeseshoni yayikukuba, "ndingawuqonda njani umahluko phakathi kwebhlog kunye nenye iwebhusayithi?" Kunyanzelekile ukuba ndicinge umzuzu, emva koko ndachaza ukuba ngekhe uphinde uchaze umahluko. Iiwebhusayithi ezininzi ezintsha zibandakanya ukubhloga njengomgangatho wecandelo lomxholo. Ewe kunjalo, iisayithi ezinje ngam 'jonga' njengebhlog- kunye nengqokelela yezithuba zejenali kwiphepha lasekhaya ngokulandelelana ngokulandelelana kwexesha… kodwa ezinye azide zisondele!
Ngubani ekufuneka ebhloga?
Omnye umbuzo omkhulu wawubuza ukuba ukubhloga kunganceda njani kwimizi-mveliso engeyiyo yezobugcisa okanye yezopolitiko. Iiblogi zibolekisa ezopolitiko ngenxa yokuxhaphaka kunye nemali. Iiblogi zihlala ziziboleke kakuhle kwitekhnoloji kuba, ivumela ubuso bayo, ukuba yiblogger ephumeleleyo ihlala ifuna ubuchule obuphezulu betekhnoloji. Iibhloko unako ngokupheleleyo ncedisa nakweyiphi na imboni, nangona! Iinjini zeblogi zamva nje kunye neenkqubo zolawulo lomxholo ziye zazenzekelayo izinto ezininzi ebezikade zisenziwa ngesandla.
Umhlobo wam, uGlenn, wabhloga ngelixa ebemishini eMozambiki. Ndiyamangaliswa kukuba inkolo kunye nabantu abanobubele abamkelanga ukubhloga ngakumbi. Iiblogi zikaFred Wilson malunga nokuba yi-Venture Capitalist. Ndiyamangaliswa kuwo onke amashishini angabhlogi, nokuba. Kutheni izazinzulu zingablogi kwaye zabelane ngokufumanisa kwazo? Kutheni le nto abathengisi bebhlog malunga nokuvulwa kwevenkile, inkonzo yabathengi, kunye nezinto ezizodwa? Kutheni le nto uMongameli ebhlog? (Akukho mntu umamela inkqubo kanomathotholo engenangqondo!) Kutheni amapolisa engabhlogi kwaye athethe ngomahluko abawenzayo eluntwini? Kutheni le nto ootitshala bengablogi kwaye babelane ngosuku lwabo lokunceda abafundi nabazali? Kufuneka babe !!!
Ukubhloga kunye noLawulo lweNkqubo yokuDibana
Umzekelo wewebhusayithi engakhangeleki njengebhlog yile CNET. The Icandelo leendaba le-CNET Ngokwenene ibhlog ngandlela zonke zegama. Amanqaku alandelelana ngokulandelelana kwexesha kwaye inqaku ngalinye linemvume yokungena, ibandakanya amakhonkco, amagqabantshintshi, iiping, kunye nolunye uphawu lwenqaku lokubhukisha kwezentlalo. Kodwa yindawo yeendaba !?
Iinkqubo zoLawulo lweMixholo zifumana ukubhloga… okanye kungenjalo. Ababoneleli besicelo seWebhu bayayiqonda ifayile ye- seo Izibonelelo zokubhloga kwaye zidityanisiwe ezo mpawu kwizicelo zazo. Kodwa abakasombululi imiba emininzi, nangona kunjalo! Izolo mna ubhale ngokugxila kumandla akho ukuze uphumelele.
Ukubhloga akukho kwahlukileyo. Kuninzi ukusebenzisa ubuchwephesha, kunye nokuninzi kokusebenzisa umxholo wakho. Abantu abaninzi babhala iibhlog ezintle kunye nomxholo omangalisayo kodwa indawo yabo iyasilela ukukhula… hayi kuba ibhlog engalunganga, kodwa ngenxa yokuba ibhlogger ayiyiqondi kwaye ixhaphaze itekhnoloji ukutsala abafundi abatsha.
Ngenxa yokufuna ukwazi, ndaya ku-goog Uqeqesho lweBlog. Andizukubiza amagama, kodwa ndiqwalasele malunga neshumi elinambini leendawo zezo nkampani okanye abantu abazihlela 'njengabaqeqeshi beBlog'. Akukho namnye kubo owathetha ngetekhnoloji yokwenyani! Ukuphonononga iinkcukacha, uninzi "lwabaqeqeshi beBhlog" yayingababhali nje beekopi kunye nabacwangcisi bebhrendi. Ngaphandle kwamathandabuzo ezi zinto zibalulekileyo zorhwebo lwenkampani, kodwa yigeesh.
Ndicinga ukuba kufana nokubaleka imoto kwaye ungaze utshintshe iigiya. Injini yakho ijikeleza ngokukhawuleza okukhulu, kodwa wonke umntu ubhabha ngawe kwaye awukwazi ukuqonda ukuba kutheni! Ufuna umqeqeshi oyiqondayo indlela esebenza ngayo yonke imoto ukuba ufuna ukuphumelela ugqatso, hayi indlela yokuqhuba kuphela. Ufuna umntu oza kufinya yonke into yokugqibela yesantya kunye namandla ngaphandle kwebhlog KUNYE nesoftware yeblogi. Impumelelo yam ngokubhloga ibidibene ngokwenene. Ndiyaqonda ukuba ngamanye amaxesha andibhali kakuhle, kodwa ndiyenzela yona ngokukhupha onke amandla ombane kwiinjini zam.
tags: Umqeqeshi webhlogukubhloga umqeqeshiCMSInkqubo yolawulo lomxholoifred wilson
Meyi 10, 2007 kwi-10: 33 PM
Inqaku elimnandi uDoug.
Yeyiphi inkomfa yewebhu okhe waya kuyo? Ngokwenene ndiya kwenye kule mpelaveki eChicago.
Ndilindele ukufumana okuninzi ngayo njengawe kwinkomfa yakho.
Abantu abavela kwi-MyBlogLog, i-VideoSticky kunye neBlogTalkRadio ukubiza ngambalwa baya kubakho. Kuya kufuneka ukuba ibe nolwazi ngokwenene.
Ndiya kuqinisekisa ukuba ndibelana ngezinto endizifundileyo ngempelaveki kunye nawe nabafundi bakho.
Qhubeka nomsebenzi omkhulu.
Meyi 11, 2007 kwi-1: 07 AM
Ndisebenza neenkampani ezingenzi nzuzo ezimbalwa ukuzinceda ukuseta iibhloko. Babekade behlawula omnye umntu ukuba enze i-html kwiindawo zabo kwizinto ezisisiseko kuba besoyika ukungcolisa iikhowudi…
Nje ukuba ndibabonise ukuba banokwenza ngokulula iincwadana / iibhulethini zabo ngebhlog, bayithanda ngoko nangoko.
Meyi 11, 2007 kwi-10: 10 AM
Ngokwenyani bendikwiseshoni encinci "ehambele phambili" ngolwesiThathu, kodwa ndonwabile ixesha kunye nengxoxo. Enkosi ngokuthatha ixesha.
Oko bendibhloga ngokobuqu kangangeminyaka emithathu enesiqingatha (ndicinga ukuba abazali bam ngabona bafundi bam bakhulu!), Kwaye ndingumxhasi omkhulu wokusebenzisa iibhlogi ezifanelekileyo Ukusebenza kwinto engenzi nzuzo eyahlukileyo, nangona kunjalo, kufuneka ndihlengahlengise iingcebiso malunga "nentengiso" kunye "nabaxhasi" ukuze ilingane nomsebenzi wethu wokwazisa abemi kunye nokwamkela abenzi beefilimu. Khange ndifumane thuba lokubuza, kodwa ndingathanda ukwazi ngeengcinga zakho malunga nokuba ukuhambisa ibhlog ngokugqithileyo kunokunceda njani kungenzi nzuzo xa kuthelekiswa nequmrhu.
Enkosi kwakhona ngokuba yinxalenye yenkomfa!
Meyi 11, 2007 kwi-10: 37 AM
Ndikuthandile ukubakho kule nkomfa. Elinjani ukuba liqela labantu, wonke umntu wayenamandla kwaye ethathe inxaxheba. Andikwazi ukunceda kodwa ndonwabe ngokwam (Mhlawumbi yayiyiVenti Mocha endandinayo ngaphambili!).
Ukungenzi nzuzo liqela elimangalisayo. Ndidibene nesibini apha ekuhlaleni kwaye sithetha ngakumbi ngeNethiwekhi yeNtanethi. Ndicinga ukuba kukho amathuba amabini:
1. Ukwabelana ngolwazi phakathi kwengeniso. Andiboni khuphiswano lukhulu phakathi kwabo, kuyamangalisa indlela abazama ngayo ukusebenza kunye! Ukubeka ulwazi kwibhlog ukuzisa uluntu lwasekhaya ndawonye kunokuba yindlela yokuhambisa iingcebiso kunye nolwazi kunye nokunceda uninzi lwengingqi olungenzi nzuzo ngokubanzi.
2. Ukwabelana ngolwazi nabaxhasi bakho kunye nabaxhasi. Ngokubiza inkampani 'engenzi nzuzo' indenza ndicinge uhlahlo-lwabiwo mali kunye nemiceli mngeni emangalisayo. Endaweni, ndiyazi ukuba i-Indianapolis Symphony ayisiyonzuzo kwaye bayakwazi ukolula izixhobo njengeshishini lomntu. Ndicinga ukuba kuya kuba kufanelekile ukunxibelelana nabaxhasi babo! Ndicinga ukuba abantu bangakulungela ngakumbi ukwabelana nokwazi ukuba zisetyenziswa njani ezo mali. (Kananjalo nokukhuthaza iminyhadala yendawo, njl.
Ndibe nekofu phezolo kunye nabantu baseIndiapolis yeNkcubeko yeNkcubeko kwaye baxoxa ngendlela ubuGcisa noLonwabo lokugubungela iNkanyezi eye emazantsi ngokupheleleyo. Bafuna iindlela ezingabizi kakhulu ukufumana igama kwaye iBhlog yeyona ndlela ifanelekileyo yokwenza oku!
Ndingathanda ukudibana nekofu kwaye sixoxe ngendlela endinokukunceda ngayo abantu!
Meyi 11, 2007 kwi-1: 29 PM
Ezinye zezi 'Abaqeqeshi beBhlog' zindikhumbuza abathengisi beoyile abadala. Lumka!
Meyi 11, 2007 kwi-7: 15 PM
Ewe-enye yezinto endiyifumene inomdla kukuba bambalwa kakhulu 'abaqeqeshi' bebhlogi ababeneebhlog ngokwabo. Ukuba awuziblogi ngokwakho, ungagcina njani kubuchwephesha kunye notshintsho kwi 'blogosphere'?
Kuya kufana nokuqesha umcebisi we-SEO ongenayo iwebhusayithi. Iyamangalisa ngokwenene!